Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan
10/05/2014 Diiwaanka Gabayadii Sayid Maxamed Cabdulle XasanAw-Jaamac Cumar Ciisemaamule
Halkan waxaa ku dhammaaday 120kii gabay ee aan gogoldhigga ku soo xusnay iyo 16 gabay oo rag kale mariyey isla markaana gabayada Sayidka iyo Daraawiishta xiriir la leh.
Haddaba, wixii khalad ama gef ah ee buuggan ka soo baxa, ulakac ma aha, sidaa ayaana lagu soo ururiyey – iyadoo weliba raadintuna aad u daba dheerayd, wakhti badanna ay nagu qaadatay ururinta iyo qorista labadaba. Hase ahaatee, waa murti iyo taariikh Soomaaliyeed oo lama kala xigo ee sida saxa ah haddii aad hubto soo gudbi. Qof kasta oo gabay hubaal ah ka haya Diiwaankaan ama taariikhdii Daraawiisheed, iwm. Haddii ay kula tahay inaad diiwaanka wax taabbagal ah ku biirin karto, waxaannu kaa codsanaynaa inaad degdeg ula soo xiriirto qorayaasha iyo dhamaanba dadka ka shaqeeyay buuggan. Aad iyo aad baannu uga mahad celinaynaa wax kasta oo nala ku soo kordhiyo.
Waxaa jirto oo weliba hubaal ah, in gabayada Diiwaankan ku qoran ay dadka qaarkii ku adag yihiin, laakiin waxaannu idin la socodsiinaynaa in aysan shaqadii buuggu weli dhammaan. Waxaannu rajaynaynaa inaan helno dad af-Soomaaliga iyo taariikhda Soomaaliyeed aqoon dheer u leh isla markaana naga caawiya sharraxa , ujeeddada, sarbeebta iyo macnaha faahfaahsan ee gabayada.
Gabayada Diiwaankan waxaannu ku tala jirnaa inaannu kordhinno. Sidaas awgeed ciddii haysa gabay Daraawiisheed, mid ay mariyeen iyo mid loo mariyeyba, fadlan soo gudbi, waa taariikh isla markaana waa lagama maarmaan in la qoro oo la diiwaan geliyo si aanay u lumin ee ay murti dhaxalgal ah ugu noqoto jiilalka dambe.
Cali Xaaji Axmed
Gabaygan gaaban waxay ulajeeddadiisu ahayd – in loogu hal daro Darwiish la oron jirey Cali Xaaji Axmed Aaden oo ay Sayidka habrawadaag ahaayeen, Cali waxaa dhasay Balax Seed Magan, Sayidkana hooyadii waxaa la oron jiray Carro Seed Magan.
Waxaa la yiri dagaalkii Ruuga ee Koofil ayaa lagu dilay Cali Xaaji Axmed oo fardaha Daraawiisheed buu madax ka ahaa, markii dagaalka foodda la is geliyey asaan wali la isu jilib dhigin, ayaa gaalkii girligaan Daraawiishta ku afuufay. Halkaas ayuu Cali Xaaji ku yiri, “War fardaha xabbadda dib uga qabta.” Waxaa markiiba loo qaatay inuu baqay, maxaa yeelay Daraawiish waxaa caado u ahayd in haddii tacshiiraad ama laba lays dhaafsado ay cadawga jiiraan.
Hadalkii Cali Xaaji oo ahaa “Fardaha rasaasta ka qabta!” hadii Sayidka loo geeyay ayuu mariyey gabaygan oo wuxuu yiri:
Caliyow habaaskii inaad, hadaftay lay sheegye
Hadalkaagu siduu noogu yimid, waa hagoognahaye
Waa kuu hundhuraayaa siduu, hooggu kuu maraye
Hadda aynu joogniyo intii, horay ka aamiina
Abidkood dagaal ma hargadaan, haybta aan nahaye
Adigaa hinjiga noo wada ee, haaligyaan nahaye
Hulqe aabbahaa baa ahaa, hogoshki dheeraaye
Waa wuxuu Hubeyr ugu fakaday, Haarriyaan dhicine
Maxaa habarwadaaggay ka dhigay, haadka cararaaya?
Gabaygani wuxuu ka mid yahay gabayadii Halacdheere ku saabsanaaa, Hobyana ka billowday, loona waddamiyey bari, galbeed, koonfur iyo waqooyi, Sayidka oo la yiri wuu ka qaybqaatay wuxuu yiri:
Hunguri Subeer wuxuu ka ridi, hogobyo shaydaane
Mar haddaanu heeg dheer lahayn, ama hoggaan ceeja
Wax hubaal ah waa inuu ka iman, haradi ciideede
Waa waxaan habaaroo Ilaah, heeray boqontiiye
Hidyaa wadatay wiilkii, hadduu hilinka soo qaaday
Huwan muu u kaco kuma qaddeen, hodon qabeenkiiye
Hartidaba wax badan baa ku nool, hilib ugaareede
Koluu hiirad oo kale noqdoo, ibilka haaneedo
Bal maxaa Hobyuu u dhigay, arladu kala hoyaad roone
Hargawaaxiddii baan ku dilay, tuugga haysha lehe
Hanqarkii rasaastaa wadnuhu, la halcanaaye
Guutooyinkii loo humeey, hadafka raaceene
Hanbo kaa sugaa ama hoheey, kugu haguugaaba
Hanta nimaan lahayn looma tago, holaca jiilaale
Haaweyda aan dhacay maxaa, haatufka u geeyey?
Iyaguba halaaggaan badey, la hundhuraayaane
Daraawiish hinfirinimay wax badan, hanatay reerkiise
Waxay ka hanfariireenba waa, huubo dooro lehe
Hawiye iyo Daaroodba waa, hayb ka gooniyahe
Ma way sooryadiin helin karaan, ma hagranayaane
Miyey hadi karaayaan wax bixin, heliba maayaane!
Nin hammuunta kaa bi’inahayaa, lagu haddoomaaye
Mar hadduu hadaadumo, xarrago haybaddeed malehe
Haadaa qabiil nimaan ahayn, hibo miyuu dhiibi?
Qamaanow1 hiddada meel san baa, lagu hagaajaaye
Hadku waa hadkii idin khatalay, Haraddigeedkiiye
Hannaankiina nimankii yiqiin, weydinkii huraye
Haddaad diinta soo haybisaan, kuma hungowdeene
Haadaan waiaa idinku guray, habaski gaabnaaye
Hadalka Keenadiid buu maqlay, hayaad kale mooge
Haddeer iyo haddeer goor qallaa, halaba keenaaba
Haamaan idiin shubi lahaa, halab karuurkeede
Haleelooyinkaa idinku filan, hootanuugta ahe
Hareerihiinna waa dhigi, waxaad ku himbilyootaane
Intaad higis dhan soo qaadataan, halacna too raacsha!
Waxaan ka qoray Xuseen Aabi Cilmi Xaasey l965kii.
1. Qamaan: Qamaan Bulxan Yuusuf oo ahaa gabayaa caan ah.
Xuseenow Ninkii Hagar Yaqaan
Waxaan horay usoo sheegnay in ammaan iyo aflagaaddo mid kasta ha noqotee Daraawiish gabayo badan loo mariyey. Cali Jaamac Haabiil ayaa Daraawiish gabay usoo mariyey, gabayga halkudheggiisuna wuxuu ahaa:
“Dameerkaa hariiryaha leh iyo, heer Dhulbahantaa leh”
Sayid Maxamed alabkiisa ahaa, haddii gabay loo mariyo, asuu doono inuu hadal ka celiyo, inuuba baro dheereeyo, gabaygana wuxuu ka tix raacay kii Cali Jaamac, wuxuuna yiri:
Xuseenow ninkii hagar yaqaan waa, habaar qabe e
Ninna hagagi mayo run baan, heeg u marayaaye
Haddii aan hammiyey aakhiraan, laga habaabeyne
Harti nimaan aqoon baa yiraah, hadalka qaarkiise
Waa niman hurmuud wada ah iyo, hanadyo waaweyne
Waa nimanka haybtoodu tahay, Haashinkaas kore e
Waa nimanka deeqi hanbaday, hibo Ilaaheeye
Waa niman intay hodon yihiin, hoog ku sii daraye
Waa niman gob baa lagu hirtaa, lagu hagaagaaye
Waa nimanka daaraha hurdiyo, harac dallaal weyne
Waa niman xariira huwanoo, huga ku laafyoone
Waa niman hashaarka gole, marada haafeyne
Waa nimanka doonyuhu Hindiya, uga himbaartaane
Waa niman haruur iyo bariis, hoyga loo dhigaye
Waa nimanka baanfuuqayee, timirtu hoos u taal
Waa niman aleeliyo horweyn, heel ka buuxsadaye
Waa niman adduun lagu huroo, maal hareerimine
Waa niman intay wada habceen, heesiguun dhiciye
Waa niman hingaar lama watee, haybad guursada e
Waa niman hablaha ay qabaan, halalac leeyaane
Sida heegadoo curatay bay, shuqul billaacaane
Waa niman hub iyo dowladnimo, haytsa weligoode
Waa niman u heensayn fardaha, halabsigoodiiye
Waa niman halqooqaha rogaal, heegma weligoode
Waa niman hadday rag is hayaan, huriya baaruude
Waa niman madaafiic higliyo, haaliggii ridiye
Waa niman hanaanaca kufriga, hoor kasoo qubaye
Daaroodku waa wada halyey, kalase hayb roone
Dalka kalena waxaa wada hulqiyo, huubo doora lehe
Waxse heer leh haad fereenji, iyo harabka Iiddore
Kuwa fuudka heeminahayoo, himishku duulaayo
Aan tan iyo Haabiil dheeryaha, lagula hawshoonnin
Iyana heer inay leeyihiin, hubantiday weeye
Hiliblaha dukaaminahayoo, horary ceeriinka
Oo dhiigga soo hililiqlayn, haysha ka caseeyey
Nimanka hablaha soorta guri, ku hargawaaxaayey
Ee tii wax hoomay tiara, kula haliilaayey
Nimanka hawaaree sidii, habas u kowdiiyey
Oo aan futada haawineyn, hogobka aad mooddo
Nimankii sidii awr hayina, hilayga qaadaayey
Hinjiga iyo culayskii, kuwuu hoolay dhabarkooda
Raggii hiirta waaberi, dillaal hadalladuu roori
Oo aan hunguriga maalimeed, soo hargalahaynin
Nimankii habeedlay ummula, huga u mayraaryey
Nimankii habeen iyo dharaar, hiribka qooshaayey
Ragga idaha horsanahayoo, saxaraduu heegan
Iyo nimanka hooyadood ku oran, habartu waa dhuustay
Axmed Nuuxa nirig haaruf badan, kabar u heereeyey
Ee hillinka meeshiyo, Hiraab habaqluhuu qaaday
Muusecarraha haragga iyo, hoorka xiranaaya
Oo qurunka ay huursadeen, lagu hunqaacayo
Ciisaha bakhtiga hiigayoo, haadka qalanaaya
Oo calaha habuurka badan, hagida meegaaya
Habar Yoonis iyo reer Jugliyo, Habar Magaadloo dhan
Iyo Caliga1 hoosada Berbera, huluqa jiida
Intii heer lahayd ma aan dhammayn, hebelladoodiiye
Hayska hoobbiyeen nimanka aan, heray boqontiiye
Inta aan hunduudaa ka badan, hiisha geedaha e
Niman baan hullaabee, ma oron hiijo iyo ceebe
Waxsaan hubinayaa waa inay, hadiyad keenaane
Hayeeshee intaasaan hojee, hor Allahay geystay!
Waxaan ka qoray Cabdi Cali Guuleed sanadkii 1957kii.
1.Cali Jaamac: Cali Jaamac Haabiil, wuxuu ahaa gabayaa caan ah, wuxuuna ka mid ahaa raggii ay Sayid Maxamed isu gabyeen.
Gabaygan hoos ku qoran qof war buuxa naga siiya ama dhammaystira lama helin, wuxuu u eg yahay inuu Sayid Maxamed diray nin Darwiish ah oo la oron jiray Cigayoon, si uu uga war keena gaalo iyo waxay maaggan tahay.
Gabaygan oo guubaabo. Dhiirragelin, iyo tilmaanba ah ayuu Sayidku mariyay, Darwiishkuna markuu soo noqday gabay buu ku warramay. Waxaa ayaandarro noqotay in labada gabayba aan la helin wax inta qoran dhaafiya, wuxuuna Sayidku yiri:
Maandhow Hawiye ma aanan diran, maanta ka horoowe
Bal inaad halyey leedihiin, la hubsan dooneeye
Heelkaa horeetana Ilaah, hogol ha ka siiyo
Geelkii Hargeysaad baruur, ka hirqan doontaaye
Iiddoor hanfade weeyaane, oo kuma hadaayaane
Hannaad baa Ilaahay ka dhigay, hoos u farara e
Meeshay ku haasaawayeen, horay u sii joogso
Haylihii xumaa iyo, bustihii habacsanaa qaado
Hana hagoogan waa tuhun, dharkaad hab isku siisaaye
Darwiishkuna markuu soo noqday isagoo Sayidka u warramaaya wuxuu yiri:
Sayidii geddoodii la baray gaala qurunleeye
Soo guure oo waxay degeen Dabagallooleeye1
Wuxuu gaashka dhow damacsanaa Gobolkii2 dheeraaye
Waagoo guduutay alaab gibila qaataan e
Gubniyuu u kala joojiyaa gegi habaas weyne
“Goo” iyo wuxuu “Raydh” lahaa waanan garaneyne
Gudub bay u fuulaan fardaha gaban sidiisiiye
Sayiddii darmaan gaaxsanaa gaari mahayaane.
1.Dabagallooleeye: Tuulo u dhexaysa Burco iyo Shiikh
2.Gobobkii: Gobab Burco ku yaal oo hadda loo yaqaan, Gobabkii Ina-Igarre.
Cabdullaahi Aaden Kiye oo reer Cali ahaa ayaa reer Haaruun nin ka dilay. Dabadeed Sayidku – si uu reer usoo jiito, wuxuu damcay inuu laba reer fidno, dagaal, iyo guubaabo ka dhex abuuro si aanay gaashaanbuur u noqon oo Daraawiish uga soo horjeesan.ee ay Daraawiish ugu soo biiraan. Gabaygan soo socda ujeeddadiisu waxay la socotaa gabaygii ahaa:
“Cabdullaahi waxaa loo qurajaray, waa qabiil li’iye”
Ninkuu Sayidku ku halqabsaday, gabayganna usii dhiibay Daraawiishi war fiican kama bixin, wuxuuna Sayidku yiri:
Xirsiyow hagaagtaye haddaad, hillinka qaadeyso
Dhexdu waa habheeboo, naftaad u hawalaysaaye
Harraad kama baqaan niman hadday, heli karaayaane
Horweynkiyo haleellada nirgaa, loo hintiqinaayo
Hammuunta iyo gaajada ninkaan, haysan baa qaba e
Haan iyo sibraar baad ku shuban, halab haruurkeede
Hayin baad ku raran qaalin waa, hilay la buubkiiye
Hawdkaad maraysiyo cidladu, way nala heshiise
Halaq iyo libaax horara iyo, haayir iyo tuugga
Astaadkaa ku heli oo Rabbuu, kaala hoos geliye
Habeenkaad Ogaadeen tagtoo, reer Isaaq hoyato
Hawraartaan kun faro iiga gee, hagari nwaa ceebe
Ha’dana yey ka dhicin xarafta, waa lagu hagaajaaye
Hadle1 iyo Umaad2 iyo Yuusuf Qaraf3, hadalku waa qaan dheh
Jiciirkii4 hormuudka u ahaa, hoos ahaan ugu dheh
Waxaad haybta reer Cali ku tari, helay warkiinnii ku dheh
Nimankii huwan ahaa dadkaan, ugu han weynaa dheh
Hiimadaan idiin sidaynay, iyo hadal naloo keenay
Waa laba hiyoo kala fogaan, haab isu lahayn dheh
Haaruun inuu dilay la maqal, horiyihiinnii dheh
Waxaa Haradigeed5 nooga timi, dhimay halyeygii dheh
Mase taladu waa hudur warkay, nagu hasaayeen dheh
Cabdullaahi6 haad inuu cunaan, hanadyo loo laynin
Ay nolol haweystaan kuwii, haniyihii gooyey
Ay heli karaan saas guntii, haarufta lahayde
Hurrihii7 xunka ahaa inuu, waran ku haylhaylo
Oo halawda jaray geesigii, lagu hagaagaayey
Oo midab haldhoolow tukaha, siiyey hilibkiisii
Waa haramcad aargoonle cunay, hadalka qaarkiise
Bah-Dhulbahante hoog kama maqnoo, heeran boqontiiye
Waa hadaadun reer Maxamedkay, hibadu saarrayde
Alleyle halkaa uma ilayn, horinta Guuleede
Nimankaan hubkoodiyo ogaa, halalacayntoodii
Aan qolo ku haystaa dhaqnayn, haybad iyo xoolo
Nimankii hubka caddaa midgaan, hoorle laga yeelye
Aan hubsado halkay fali kuwaa, lagu hariiryeeyey!
Waxaan ka qoray Xaaji Aaden Xuseen sanadkii 1955kii.
1.Hudle: Hudle (Boojaali) Yuusuf Maxamed
2.Ina ayihiisii la garan waa.
3.Yuusuf Qaraf: Yuusuf Iimaan Cumar.
4.Jiciir:Jiciir Maxamed Liibaan Jiisoow.
5.Haradigeed: Waa 28 balli oo u dhexeeya Harafaafan-yar iyo Harahabaskuul.
6.Cabbaas: Aw Cabbaas Xuseen Muuse, waxaa lagu dilay shirqoolkii Gurdami.
7.Hurre: Ibraahim-Bayr Xasan Odowaa.
Hashaan Heensuhu Siday
Boqol nin oo Daraawiish ahaa oo ceelka Afyaraaddo lagu dilay, horena aannu ugu soo sheegnay taariikhdooda hordhigga gabaygii ahaa:
Daraawiishta Saalixiya eey dood aan ku iraahdo.
Duullaankii u baxay ayaa geel farabadan soo dhacay. Geelaa oo Xalliye la baxay waxaa la gabagaba dhigay balliga Caadood, waxaa la yiri geela sannad baa halkaa lagu hayey oo raacdo lagu sugayey, jiiftadan hoose ayaa geelaas loo mariyey, wuxuuna Sayidku yiri:
Hashaan heensuhuu siday, himmaaddeeda duullaan
Hashaan hilayga ugu raray, hayinka iyo awrkii
Hashaan hiirta waaberi, himhimowga ugu kacay
Hashaan hillinka Doollood1, habaqle ugu jiilaa
Hashaan dhowr habeen iyo, maalmo badan u hawlgalay
Hashaa aan hagoogtiyo, hullaabtii isaga rogay
Hashaan Habarsaciid iyo, humbannadii u weeraray
Hashaan ku himbilyoodee, ku hanqaaray dunida
Hashay hebelladeedii, dhirta ay huluusheen
Hashii hoorrigeygiyo, hinfirkayga lagu nacay
Hashaan kii horjoogsaday, huluq siiyey warankii
Hashaan beel bannaan tubay, hundihii Warfaa2 dhaqay
Hashey gaalka Herer jiraa, qaylageyska u hudeen
Hashaan hara ku oodee, ninna uusan igu holin
Hashii heegadii roob, higilkeeda loo filay
Hormo looma jiidee, hashaan heeg isaga waday
Hashaan lagu hanqaarmeyn, habarwacadka ololkii
Hashaan haaliguu riday, hanqar iyo madaafiic
Hashaan huuraweynow, Subeyr Maxamed ka hantiyey
Hashaan haaruf dhogorrow, haaruun u quursaday
Hashaan Dalal harkoo galay, hargawaaxa kaga diray
Hashaan hoorinta Raabbi3 leh, heeraaga ka asladay
Hashii hanaddadeedi, ku hamsiyey waraabuhu
Hashaan haatuf uga diray, Iljeexii4 hagaysnaa
Hashuu ka hanfariiree, hubin waayey jeerkii
Hashuu ka himbiriirsaday, Hiiradkii5 qurmoonaa
Hashuu hawdka jaree, haaruhu ku gaareen
Hashaannu haayaddeed gelin, hooyhooy markaan niri
Hashuu huray dharaartii. fulihii hingaarraa
Hashuu hoogayey yiri, hohey! maxaa inoo dhaqay
Hashuu iiga haajiray, Gurraasihii6 habka xumaa
Hashaannu horarin dirirteed. harabkii afka caddaa
Hashaanan haybta reer Magan. waxba aanu ku hamkayn
Hashaan sumadda hororka ah, halka luqunta kaga dhigay
Hashaan baarqab heeg dheer, haysimada ugu daray
Hashaan soo hintiqiyoo, hadba hogob ku soo furay
Hashaan kaga hareerraa. haaweyda caydhaa
Walle maanta kii hola, huga dhiigga kaga qubay!
Waxaan ka qoray Cali Cabdi Guuleed sannadkii 1967kii.
1.Arag gabayga 26aad.
2.Warfaa Xirsi Khalaf.
3.Raabbi Guuleed Xirsi.
4.Iljeex: Xuseen Yuusuf Xirsi, wuxuu ka mid ahaa raggii abaabulay shirqoolkii Gurdumi.
6.Gurraase Xaaji Cali, wuxuu isna ka mid ahaa raggii abaabulay shirqoolkii Gurdumi.
Xuseenow Ninkii Xididkiis Hagraday
Nin magaciisa la oron jiray Cabdalla Cawl Maxamuud oo degmada Laasqoray u dhashay ayaa xarunta beryihii ay Daraawiishi calan-walleynaysay. Ninkaasi wuxuu Sayidka weydiistay in la siiyo Faaduma-qarad Shiikh Cabdulle oo Sayidka la dhalatay.
Dabadeed waa laga yeelay, usna wuxuu balanqaaday inuu xoolo badan keeno mood iyo noolba, gaar ahaan hub lagu dagaal galo. Taas Sayidka aad buu ugu riyaaqay. Cabdalla waa tagay si uu ugu soo tabaabusheysto guurkiisa iyo min-dhismadiisa, hase ahaatee soo noqodkiisii wixii lagu filayay ma keenin, weliba si qaab daran buu xarunta ku yimid, taasoo ahayd, isagoo niman carab ah oo gedisley ah garwade u soo noqday si uu xoolahooda ugu meel maro. Dabadeed Sayidku kolkuu ogaaday inuusan Cabdalla ee uu hadal badan iyo afmacaani wax ku doonaayo, uma xil qarine, safarradii oo meel lagu furay ayuu wuxuu ku yiri, xoolihiinna daartaas u daadguraysta, Cabdalla wixiisina meesha uga taga. Dabadeed joonyad xoogaa dhar ihi ku jiro ayaa meeshii looga tegey, ka dib Sayidku gabay ayuu Cabdalla u mariyey, gabaygana waxaa loo bixiyey Hadaafaa:
Ninkii waliba hawada Faadumuu1, haanka ku hayaaye
Waxaan ka qoray dhowr nin oo Daraawiish ahaa oo ay ka mid ahaayeen, Cali Cabdi Guuleed iyo Xaaji Cabdiraxmaan Sayid Maxamad sannadkii 1958kii.
1.Faadumo: Faadumo-qarad Sayid Maxamcd oo gabdhaha ilmo Sayid u weynayd.
Hanfi Iyo Hunriga Soo Dhaca
Markii Taleex la dhisay ee ay Daraawiishna xarun u noqotay, magacoodii iyo maalkoodiina kor u kacay oo ay taawiyeen in Ilaah mooyee aan aadane wax ka tarayn, murtidii iyo gabayadii si aan qiyaas lahayn ayay u soo baxeen, Daraawiishta ammaan iyo aflagaaddaba gabayo badan ayaa loo soo mariyey. Cali Jaamac Haabiil oo ay Sayidka xafiiltan lahaayeen raggii Daraawiish ka soo horjeedayna ka mid ahaa, ayaa dhowr gabay oo ceebayn ah Sayidka u soo diray. Inkastoo Sayidku gabaygan dadoo dhan wada mariyey, haddana ujeeddada ugu weyni waxay ahayd Cali Jaamac in loogu hal daro. U fiirso, gabaygan wuxuu ina tusaayaa in murti, aftahannimo iyo hadal aqoontii, Eebbe weyne, hoodo uga dhigay Sayid Maxamcd Cabdulle Xasan. Wuxuuna Sayidku yiri:
Hanfi iyo hunguri soo dhiciyoo, hinif dabayl baa leh
Hanqar iyo hillaac biligliyo, halac roob baa leh
Cir habqamay hareed laga harqaday, Haradigeed baa leh
Xiin hawle iyo heega curan, hogol daruuraa leh
Hir doogliyo caleen hamasha iyo, habatac ciid baa leh
Maal hooray ciir laga hanfaqay, seben hagaagaa leh
Caana had iyo jeera iyo, heeshi ramag baa leh
Qumbo lala hagoogtiyo hilbiyo, hawl yar ari baa leh
Hiyinnimo wax lagu qaato iyo, ku hinji awr baa leh
Habaqliyo harraad iyo kulayl, hilin abaar baa leh
Haddii hadowgu geedood engago, horasho ceel baa leh
Haga hagi hunguri duulayiyo, hogo kaliil baa leh
Harac iyo qabow lala herjado, hadh iyo raaxaa leh
Hawo iyo hilow gacalo iyo, hurud nabdoon baa leh
Hanfariir in loo kala ordiyo, hunuf dareen baa leh
Lugi waa higlishee himmiyo, halabsi neef baa leh
Haad iyo haldhaa roori iyo, huguf gammaan baa leh
Gorgor samada heehaabi iyo, huguguf Dhooddaa1 leh
Hanfaf booddo iyo xoog sengiyo, hadafa buubaa leh
Himbiriirsi meel foga magaan, higigifleeyaa leh
Haddii nadigu haaraha ku dhigo, haawis Xamar baa leh
Aar soo hingoodiyo bad iyo, hoobsi guluf baa leh
Hamham iyo hamsiga reenka iyo, higilla guutaa leh
Hannas weerar iyo qaylo iyo, hirif colaad baa leh
Heeraa in la isula bixiyo, heegan dirir baa leh
Hirey iyo wirey maalintay, humuro joogtaa leh
Haadaa qabiilnimo nimaan, lagu holayn baa leh
Hawa beena Soomaalidaa, hadafka raacdaa leh
Hadal ruma Daraawiishta iyo, weli hanoonaa leh
Raggii diinta hooyga u noqdiyo, hanad shirshooraa leh
Hammuunaan damayn iyo, hunguri lala hadaaqaayo
Handadka iyo heemada markuu, hadawga leefaayo
Warsangeligu heybtuu yihiyo, horor dugaag baa leh
Hoobaaq laguu qodahayiyo, hagar shisheeyaa leh
Hundhur iyo caloolxumo ninkii, cadawgii heeraa leh
Hankuugyo uurgulguluc ninkii, hiijo qabay baa leh
Inaad luqunta hoogaamisiyo, hogosho ciil baa leh
Meeshiyo habeen aakhiraad, hibasho maag baa leh
Haakaalle Eebbow ninkii, libin hoyaadshaa leh
Hoh! iyo caku iyo ninkii, hawkar galay baa leh
Halaaka iyo laandeyr ninkii, marin habaabaa leh
Hinji iyo habaar Waaq ninkii, huray astaadkaa leh
Heeggaa in loo maro arlada, habi la’aan baa leh
Hor Ilaah in loo jeensadiyo, haajir culumaa leh
Haawiyadaa naareed ninkii, fereenji haystaa leh
Iiddoorka hoosada Berbera, ka hawisaa hey! leh
Harag uraya Muuse Carrihii, hoodhi jiray baa leh
Hadduu niriggu heeryada ka rido, hoogay! Arab baa leh
Xaal hadura Habaryoonis iyo, Herer nin joogaa leh
Ciisaha baqtiga hiigaayiyo, haqay midgaan baa leh
Huuraale Cali Jaamac2 iyo, huluq dameer baa leh
Xididnimo habbonkeed ninkii, lagu hirtaa baa leh
Hargaamooyin iyo ceeb ninkii, gun u hoyaadaa leh
Hiddo xumo gobey heerle iyo, horinta Cawl baa leh
Hub wanaagsan heensiyo fardiyo, haybad iyo luuli
Hodyo deeqa hoo iyo waxsiin, hor Alle geystaa leh
Hannaan quruxsan haashaar gobeed, hodon Dariiqaa leh
Horweynkiyo haleellada nirgaha, loo hintiqinaayo
Haamaha karuurkee la shuban, holac jiilaalka
Heel xoola laga buuxiyiyo, hibana Eebbee leh
Hal madow higgaad iyo Qur’aan, H iyo W reebban
Harannimiyo hooyaale gabay, heello iyo maanso
Nin kaleba naftiisa ha hafree, hooda anigow leh!
Waxaan ka qoray Xaaji Axmad Aaden Surgo sannadkii 1956kii.
1.Dhooddi: Faras qurux iyo dheerayn caan ku ah.
2.Cali Jaamac: Cali Jaamac Habiil, wuxuu ahaa gabyaa caan ah oo ka mid ahaa raggii u gabayay Sayidka.
Daraawiish iyo dad oo dhami wuxuu isku raacay in Sayid Maxamed uu fardaha ammaantooda ku tilmaamay kow iyo labaatanka xaraf ee af Soomaalidu ku gabaydo. Nasiibdarro geeraarrada inyar mooyee intoodii badnayd ma aannaan helin ee way lumeen. Geeraarka soo socda waa ammaan faras, ha yeeshee faraska loo la jeeday wax sheega lama arag, geeraarku waa kala dhiman yahay sida ka muuqata ama ay nala tahay. Wuxuuna Sayidku yiri:
Midabkiisu halyeygoo, hiribboo kala noocoo
Hiriiryii ku dhigeenoo, halow yeeshay miyaa!
Haldhaa meel fog ka muuqdaa, halqooqii bixinaayoo
Haysha baal lalminaayoo, hallibaaya miyaa!
Hannaankiisa wanaaggiyo, haybaddiisa buruudka
Naftu waw hibataaye, hibo Eebbe miyaa!
Afku waa holholkaasoo, gowso huuro ku taal buu
Xakamaa ku hudbaaye, madag hiil leh miyaa!
Bacaraarka hulkiisa, hadduu hiif kaga siiyo
Wiyil soo handanaayoo, hanqaraaya miyaa!
Sidii aar hala laayayoo, dagaal loo harareentay
Indhuhuu holcinaayoo, holoc naara miyaa!
Hagaagga kalxadiisa, hogsalaanta kobteeda
Gabbashaa lagu heeray, bil hangoolsan miyaa!
Kolkii uu hoganaayo, hadduu haayir dareemo
Dheguhuu hulkinaayoo. ma hootooyin aflaa!
Guudka haydhafanaayoo, hareeraha marinaayo
Sida geydhaha hawdoo, hugfanaaya miyaa!
Qanaantuu hurgufaayo, halqooqeeda lulaayo
Hayrarooti galbeedoo, hoorimaadi miyaa!
Fanku buur hiyil weynoo, hamaashowday caleenoo
Xaygu uu holliitaayo, hiraraysay miyaa!
Haddii uu hardafaayo, ma hanqaaro naftaada
Hintiqluu u socdaaye, hebed xaal san miyaa!
Haddaan jeedal la hiilay, ku hawaarsho sintiisa
Hatatoobsiga boodda, ma aar soo hig yiraa!
Haddaan hoyga u buuxsho, hanbo iigama reebe
Hilif buu ka dhigaaye, Halacdheere1 miyaa!
Afartuu ku hadaafo, dhulka waa hurgumaanoo
Habaas bay ku kacshaane, beel hayaantay miyaa!
Isagaan hul lahayn buu, hulqihii lalmiyaayoo
Ninna haab kama yeeshee, caqli haatuf miyaa!
Geeraarkan intaan hayno waxaannu ka qornay Cali Darmaan sannadkii 1957kii.
1.Halacdheere: Xuseen Cashuur Cali oo tilmaan ku lahaa hunguri badnaan.